pyaewinkyawthu – Ministry of Hotels & Tourism Myanmar
The Latest Covid-19 Travel News from Myanmar
September 3, 2020pyaewinkyawthuAnnouncements
ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အခွန်အခများအား Online မှတဆင့် ငွေပေးချေနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း အသိပေးခြင်း
၁။ မြန်မာနိုင်ငံ၊ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့် ဆက်စပ်သည့် အောက်ပါလုပ်ငန်းများ အတွက် ၁-၉-၂၀၂၀ ရက်နေ့မှစ၍ Online မှတဆင့် MPU Card ၊ Visa Card ၊ Master Card ၊ JCB Card ၊ UnionPay Card နှင့် CB Pay များကို အသုံးပြု၍ ငွေပေးသွင်းနိုင်ပြီဖြစ်ပါသည် − (က) လိုင်စင်ကြေးများ (ခ ) ဗီဇာကြေး (ဂ) Web Portal Membership ကြေးနှင့် ကြော်ငြာကြေးများ (ဃ) သင်တန်းကြေးများ (င) တင်ဒါ မှတ်ပုံတင်ကြေးများ ၂။ ဝန်ကြီးဌာန၏ https://payment.tourism.gov.mm မှတဆင့် ဝင်ရောက်အသုံးပြုနိုင်ပါကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။
May 29, 2020pyaewinkyawthuNews
Yangon region issues three hotel licenses, two construction permits
YANGON regional tourism committee has granted licences to three hotels with 179 rooms, and construction permits for two hotels at the meeting held on 22 May. The total capital for hotels and guesthouses is estimated at K 18,160 million and this endorsement will create 107 jobs. “Yangon, the commercial hub of the country, is attracting...
UNION Minister for Hotels and Tourism U Ohn Maung attendedavideo conference for coordinating on the COVID-19 Myanmar Tourism Strategic Roadmap (draft) from his ministry’s office yesterday. The meeting was also attended by Deputy Minister U Tin Latt, Director-General U Maung Maung Kyaw of the Directorate of Hotels and Tourism, ministry officials, the chairman of the Myanmar Tourism Federation, and chairpersons of the 11 affiliated associations. The Union...
May 28, 2020pyaewinkyawthuAnnouncements, News
MOHT COVID-19 Resilience Package (5)
Ecotourism Tour Guide Online Training သဘာဝအခြေခံခရီးသွားဧည့်လမ်းညွှန်သင်တန်းဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ကြောင်း ကြေငြာခြင်း ***************************************************************** ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားကဏ္ဍ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်နှင့် Coronavirus Disease2019 – COVID 19 ကြောင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်း ကျဆင်းလျှက်ရှိသော တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များ၌ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းများပြန်လည်မြှင့်တင်နိုင်ရန်ရည်ရွယ်၍ သဘာဝအခြေခံခရီးသွား ဧည့်လမ်းညွှန် သင်တန်းများကို Australia ACS Distance Education နှင့်ချိတ်ဆက်ကာ Online မှတဆင့် သင်တန်းတက်ရောက်နိုင်ရန် စီစဉ်ထားပါသည်။ သဘာဝအခြေခံခရီးသွား ဧည့်လမ်းညွှန်သင်တန်းတွင် Ecotourism Basics, Interpretive Services in Ecotourism, Ecology and Conservation , Plant and Animal Classification and Identification, Geology/ Geomorphology, Interpreting Aquatic...
May 28, 2020pyaewinkyawthuAnnouncements, News & Announcements
MOHT COVID-19 Resilience Package (4)
National Guides Program for UFL Graduates and Graduates with Recognized Language Proficiency Certificates ဧည့်လမ်းညွှန်(အခြေခံ)သင်တန်း (National Guide)သင်တန်းဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ကြောင်းကြေငြာခြင်း ************************************************** ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားကဏ္ဍ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်နှင့် Coronavirus Disease 2019 – COVID-19 ကြောင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်း ကျဆင်းလျှက်ရှိသော တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များ၌ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ ပြန်လည်မြှင့်တင်နိုင်ရန်ရည်ရွယ်၍ ဧည့်လမ်းညွှန် (အခြေခံ) သင်တန်းကို ရန်ကုန်မြို့ရှိ ခရီးသွားလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဗဟိုဌာနတွင် ဖွင့်လှစ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဧည့်လမ်းညွှန်(အခြေခံ) သင်တန်းတွင် National Skill Standard Authority (NSSA) မှ အတည်ပြုထုတ်ပြန်ထားသော Tour Guide – Level 3, National Tour Guide...
MOHT COVID-19 Resilience Package (3)
ASEAN Standard Tour Guide Upgrading for National Guides ဧည့်လမ်းညွှန်မွမ်းမံသင်တန်း( ASEAN Level 3)သင်တန်းဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ကြောင်းကြေငြာခြင်း ******************************************************* ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားကဏ္ဍ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်နှင့် Coronavirus Disease 2019 – COVID-19 ကြောင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်း ကျဆင်းလျှက်ရှိသော တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များ၌ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းများပြန်လည်မြှင့်တင်နိုင်ရန်ရည်ရွယ်၍ ASEAN Level3အဆင့်ရှိ ဧည့်လမ်းညွှန်(မွမ်းမံ) သင်တန်းများကို ရန်ကုန်မြို့ရှိ ခရီးသွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဗဟိုဌာနနှင့် ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန (မန္တလေးရုံးခွဲ) အသီးသီး၌ ဖွင့်လှစ်ပို့ချသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ အာဆီယံအဆင့် ဧည့်လမ်းညွှန်မွမ်းမံသင်တန်းတွင် ASEAN Certificate IV in Tour Operation(Guiding) မှ Core & Generic Competency Unit ၁၈ ခု...
May 15, 2020pyaewinkyawthuNews & Announcements
Myanmar air travel ban extended to end of May
THE period for Temporary Measures to Prevent the Importation of COVID-19 to Myanmar through Air Travel has been extended to 31-5-2020, 11:59 pm Myanmar Standard Time, with permission from the National-Level Central Committee for Prevention, Control, and Treatment of COVID-19. The temporary measures, issued by the Ministry of Health and Sports, were first imposed on 29-3-2020 and extended once to 15-5-2020 before....
May 4, 2020pyaewinkyawthuNews, Uncategorized
ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဆောင်၍ ပြည်ပ မှ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာကြမည့်မြန်မာနိုင်ငံသားများကိုQuarantine ပြုလုပ်ရေးအတွက် လိုအပ်သည့် ဟိုတယ်များခွင့်ပြုပေးနိုင်ရေးလုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို Video Conferencing ဖြင့်ပြုလုပ်
ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဆောင်၍ ပြည်ပ မှ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာကြမည့်မြန်မာနိုင်ငံသားများကိုQuarantine ပြုလုပ်ရေးအတွက် လိုအပ်သည့် ဟိုတယ်များခွင့်ပြုပေးနိုင်ရေးလုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို Video Conferencing ဖြင့်ပြုလုပ် ********************************************************************************** နေပြည်တော်၊ ဧပြီလ (၂၈) ရက် ယနေ့ (၂၈-၄-၂၀၂၀) ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွား လာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအုန်းမောင် ဦးဆောင်၍ ပြည်ပခရီးသွားလုပ်ငန်း (Outbound Tour) များ အရည်အသွေးပြည့်မီ စေရေးနှင့် ပြည်ပမှ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာကြမည့် မြန်မာနိုင်ငံသားများကို Quarantine ပြုလုပ်ရေးအတွက် လိုအပ်သည့် ဟိုတယ်များခွင့်ပြုပေး နိုင်ရေး လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်း အဝေးကို ဝန်ကြီးဌာန နီလာ အစည်းအဝေးခန်းမမှ Video Conferencing စနစ်ဖြင့် ကျင်းပရာ အစည်းအဝေးသို့ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးတင်လတ်၊ ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီး...
May 4, 2020pyaewinkyawthuNews
အာဆီယံခရီးသွားလုပ်ငန်းဝန်ကြီးများ၏ COVID-19 ဆိုင်ရာ Video Conference အထူးအစည်းအဝေးအား ကျင်းပခြင်း
အာဆီယံခရီးသွားလုပ်ငန်းဝန်ကြီးများ၏ COVID-19 ဆိုင်ရာ Video Conference အထူးအစည်းအဝေးအား ကျင်းပခြင်း **************************************************************************************** နေပြည်တော်၊ ဧပြီလ (၂၉) ရက် အာဆီယံခရီးသွားလုပ်ငန်းဝန်ကြီးများ၏ COVID-19 ဆိုင်ရာ Video Conference အထူးအစည်းအဝေးကို ၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊ ဧပြီလ (၂၉) ရက်နေ့ နံနက် ၈:၃၀ နာရီမှ ၁၀:၃၀နာရီ အထိ Video Conferencing ဖြင့်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှ ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အင်ဒို နီးရှားနိုင်ငံမှ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပြီး အာဆီယံခရီးသွားလုပ်ငန်းဝန်ကြီးများ၊ အာဆီယံအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်၊ အာဆီယံခရီးသွားလုပ်ငန်း အာဏာပိုင်အဖွဲ့ခေါင်း ဆောင်များနှင့် ကိုယ်စားလှယ်များပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။ ယခုအထူးအစည်းအဝေးသည် COVID -19 ကြောင့် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၏ ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းအပေါ် ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုအခြေ အနေများ၊ သက်သာလျော့ပါရေးနှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းများ စီစဉ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် အခြေအနေများကို သုံးသပ်အကဲဖြတ်စာတမ်းရေးသားထုတ်ဝေရန်နှင့်...
April 20, 2020pyaewinkyawthuAnnouncements
ခရီးသွားလုပ်ငန်းများမှ လိုင်စင်ကြေး၊ လိုင်စင်အသစ် လဲလှယ်ကြေးများ ပေးဆောင်ခြင်းကို ၁-၄-၂၀၂၀ ရက်နေ့မှ ၃၁-၃-၂၀၂၁ ရက်နေ့ ကာလအထိ တစ်နှစ်ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုမည်
နေပြည်တော်၊ ဧပြီလ ၁၅ ရက် ၁။ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားကဏ္ဍ ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် ခရီးသွားများဘေးကင်းလုံခြုံအဆင်ပြေစွာ အပန်းဖြေအနားယူနိုင် ရန် ရည်ရွယ်ချက်ထား ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ၂။ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ မြန်မာနိုင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်းဥပဒေ (၂၀၁၈) နှင့်အညီ တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်များတွင် ဒေသဆိုင်ရာခရီးသွားလုပ်ငန်းကော်မတီများ ဖွဲ့စည်း၍ ထိုကော်မတီများက သက်ဆိုင်ရာဒေသအလိုက် ဟိုတယ်လုပ်ငန်း၊ တည်းခိုရိပ်သာ လုပ်ငန်း၊ ခရီးလှည့်လည်ရေးလုပ်ငန်း၊ ဧည့်လမ်းညွှန်လုပ်ငန်းများအတွက် လိုင်စင်ကြေး၊ လိုင်စင် အသစ်လဲလှယ်ကြေးများကို ကောက်ခံလျက်ရှိပါသည်။ ၃။ ...